YEYINTNGE(CANADA): Thursday, January 31
ဓာတုပစ္စည်းရောစပ်သည့် ငံပြာရည်အတု ဈေးကွက်ရှိဟု ငါးပိငံပြာရည်လုပ်ငန်းရှင်များဆို
ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ငံပြာရည်အတုဈေးကွက်မှာ မြို့ကြီးများနှင့် ကျေးလက်ဒေသများပါမကျန် ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေပြီး မိရိုးဖလာငါးပိငံပြာရည်လုပ်ငန်းများ ကြီးပွားချမ်းသာ ရန်မလွယ်ကူ
တော့ကြောင်း ဟင်္သာတမြို့မှ ငါးပိငံပြာ ရည်လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
မိရိုးဖလာငံပြာရည်ကိုငါးပိမှတစ်ဆင့်လနှင့်ချီ၍ နှစ်ပေါက်အောင်ထုတ်လုပ်ရပြီးဓာတုဗေဒငံပြာရည်မှာမူဆားနှင့် ရေကိုဓာတုဗေဒငံပြာရည်အနံ့နှင့်အရောင်ရောစပ်ကာချက်ချင်းဗူးသွတ်၍ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဖြန့်ချိနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း မှာလည်း ကျပ်၂၀၀ ခန့် သက်သာကြောင်း၊ ဖြန့်ချိပေးသောဆိုင်များကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းများလည်း ပေးအပ်ကြောင်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။
“အတုကိုဝယ်တဲ့လူက တုတာကို အတုလို့လုံးဝမသိလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါ ပေမယ့် ငံပြာရည်အစစ်က တစ်ပုလင်းကို ကျပ် ၅၀၀၊ အတုက ကျပ် ၃၀၀၊ သူ့ကိုကျပ် ၅၀၀ ရောင်းရင် ကျပ် ၂၀၀ မြတ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျပ် ၅၀၀ကိုကျပ် ၇၀၀ ရောင်းရင် စားသုံးသူက မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ စားသုံးသူက ဟင်းအိုးထဲကို ငံပြာရည်လောင်းလိုက်တယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲ။
အဲဒီတော့ အတုနဲ့အစစ်နဲ့ ယှဉ်လို့မရဘူး။ စားဝတ်နေရေးအတွက် သမ္မာအာဇီဝရှာလို့ရတယ်။ ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ကမရဘူး”ဟုဟင်္သာတမြို့နေ ငါးပိ၊ ငံပြာရည်လုပ်ငန်းမှ ဦးနေ၀င်းက ပြောသည်။
ဓာတုဗေဒငံပြာရည်များကိုစားသုံး ခြင်းကြောင့် အသည်းရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်သဖြင့် အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်သည်ဟု သိရသည်။
“အရက်သမား တစ်ယောက်က အရက်သောက်ရင်သူတစ်ယောက်တည်းပဲ ခံရမယ်။ ငံပြာရည်အတုထွက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ငံပြာရည်အတုစားရင် အိမ်ကမိသားစုတစ်ခုလုံးခံရမှာ။ အဓိကပြောချင်တာက အတုစားမယ့်အစား ဆားနဲ့စား၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ငံပြာရည်အတုတွေထွက် နေတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ကဒါကိုအလေး မထားဘူး””ဟု ဦးနေ၀င်းက ဆက်ပြောသည်။
မိရိုးဖလာငါးပိလုပ်ငန်းမှာ စားသုံးမှုအတွက် ဖူလုံမှုရှိသော်လည်း ငံပြာရည်မှာဖူလုံမှုမရှိဟုသိရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာတမြို့တွင် ငါးပိ၊ ငံပြာရည်အများဆုံးထွက်ရှိပြီး ဖျာပုံ၊ ပုသိမ်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းဒေသတို့တွင်လည်း ထွက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။
“ငံပြာရည်တု၊ မတုတော့မသိဘူး။တစ်ချို့ငံပြာရည်တွေက နည်းနည်း လောက်စားရုံနဲ့ သွေးတိုးလို့မစားဖြစ်တာကြာပြီ။ထိုင်းက ထုတ်တဲ့ငံပြာရည်ပဲ ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စား တယ်”ဟု မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မှ စားသုံး သူ တစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/31/20130အကြံပြုခြင်း
လုံးခင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒေသခံတွေထံက ပစ္စည်းတွေ သိမ်းယူ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသ လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု လုံးခင်း နဲ့ မှော်စီစာရွာကြားမှာရှိတဲ့ လုံးခင်းဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် လုံခြုံရေးရဲကင်း နားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် ည ၈ နာရီခန့်က လုံခြုံရေးအင်အား ၂၀ လောက်က ဒေသခံပြည်သူ ၄၀ လောက်ကို တာဝန်အရ စစ်ဆေးတယ်ဆိုပြီး သူတို့မှာပါလာတဲ့ ရွှေဆွဲကြိုး၊ လက်စွပ်၊ ဟန်းဖုန်းကအစ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အာဇာနည်ဗိမာန်ရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ပေါက်တော ပိန္နဲချောင်းကျွန်းသားများက ဘင်္ဂါလီများကို ရွှေ့ပြောင်းပေးစေလိုကြောင်း အသနားခံစာတင်
စစ်တွေ ၊ ၃၁ ဇွန်န၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]
မိမိတို့နေရင်းအရပ်တွင် ဘင်္ဂါလီလူဦးရေအဆမတန် တိုးပွားလာမှုကြောင့် ပေါက်တောမြို့နယ် ပိန္နဲချောင်းကျွန်း (ခေါ်) အလယ်ဖရုံကာကျွန်းသူကျွန်သားများမှာ လုံခြုံရေး၊ နေထိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ ၀မ်းစာရှာဖွေရေး အစရှိသည်များ ခက်ခဲလာသဖြင့် အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေထုအား မိမိတို့ဒေသမှ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးပါရန် အသနားခံစာကို ယနေ့ ဇွန်န၀ါရီလ (၃၁) နေ့ နေ့စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ပေးပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသနားခံစာတင်ကြသူများက Coral Arakan အားပြောကြားသည်။
ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားပေါင်း (၆၅၅၀) လက်မှတ်ထိုးထားသော အဆိုပါ အသနားခံစာကို တင်ရခြင်းမှာ တောသူတောင်သား ရခိုင် နှင့် ခမီ တိုင်းရင်းသားများမှာ ဘင်္ဂါလီများက တိုက်ခိုက်ရန်ရှာတတ်သဖြင့် ငါးရှာ ကဏန်းနှိုက် မလုပ်ရဲတော့ ဒေသခံများမှာ စားဝတ်နေရဲခက်ခဲလာကြသည် ဟု ဦးဆောင်သူတစ်ဦးက Coral Arakan အား ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂-ခုနှစ် နှစ်ကျော့နှစ်ကြိမ် ဘင်္ဂါလီဆူပူမှုအတွင်း ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များသည် ၄င်းတို့အင်အားကောင်းရာနေရာများသို့ လူဦးရွှေ့ပြောင်းမှုပြုကြရာမှ ပေါက်တောမြို့နယ် တွင် ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ အထူးများပြားလာခဲ့ပြီး ရခိုင် နှင့် ခမီး တိုင်းရင်းသား ရေလုပ်သားများကို အင်အားသာပါက အလစ်တိုက်ခိုက်ခြင်း တို့ကို ပြုတတ်ကြလေ့ရှိသည်။
( Coral Arakan News အတွက် ယုသန္တာခင် ရေးသားသည်။ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် "ဂွမ်ဂျူး လူ့အခွင့်အရေးဆု" ကို လက်ခံရယူ
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက် ဒီကနေ့ "ဂွမ်ဂျူး လူ့အခွင့်အရေးဆု" ကို လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးဘအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ကိုရီးယား ဒရမ်မာ ကား ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလား အောက်မေ့ရတယ်
By Miko Zan
ဒီည သရုပ်ဆောင်များ နဲ.ညစာစား ပွဲ ကို အသွား
ဒီည အမေနဲ. ထမင်း အတူစား မည်. သရုပ်ဆောင်များ
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကွန်ရက်က သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ထံ ပေးပို့ထားတယ်လို့ ရှေ့နေများကွန်ရက်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
Kaungsetlin Ksl Tcl
ထမင်းတစ်နပ်ဘဲ စားပါဆိုလို့... စဉ်းစားနေတာ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/31/2013 1 အကြံပြုခြင်း